Apple hanambatra tahirin-kevitra iCloud sy serivisy data miaraka amin'ny iCloud Drive amin'ny Mey 2022 | Avy amin'ny mac aho
Apple hanambatra ny iCloud Documents sy ny serivisy Data miaraka amin'ny iCloud Drive amin'ny Mey 2022
Manuel Alonso | | maro
Ny gazety manokana amin'ny Apple sy ny teknolojia, MacGeneration, dia namoaka fa raha ny vaovao vaovao ananan'izy ireo, Apple dia mikasa ny hanakambana ny Serivisy iCloud sy serivisy data miaraka amin'ny serivisy iCloud Drive. Ity fanamoriana ity dia natao amin'ny volana Mey amin'ny taona ho avy. Tamin'ny 2022, manome fotoana ho an'ny mpampiasa ny fanovana.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manazava ireo hevitra roa. Mety efa fantatrao izany, nefa tsy maharary mihitsy ny mahay mamaritra tsara izay resahina. Fantatsika araka izany fa iCloud dia serivisy fitehirizana rahona izay ampiasaina amin'ny serivisy isan-karazany natolotr'i Apple. raha iCloud Drive miasa toy ny OneDrive, ohatra, serivisy miditra amin'ny iCloud.
Mizara ny fahaiza-mitsikera izy ireo amin'ny famerenana ireo angona fampiharana. Na izany aza, ny antontan-taratasy dataiCloud‌ sy ny angon-drakitra matetika dia zavatra niainana sarotra sy nampikorontana. MifanohitraiCloud Drive‌ dia miray kokoa, ary ny mpampiasa dia afaka miditra amin'ny fisie sy ny atiny amin'ny alàlan'ny fampiharana Files amin'ny fitaovany rehetra.
Manomboka amin'ny Mey amin'ny taona ho avy, ireo mpampiasa mampiasa antontan-taratasy dataiCloud‌ sy angon-drakitra dia hamindra azy ireo ho any accountsiCloud Drive‌. Na izany aza, tokony avelao amin'ny tanana ny ‌iCloud Drive‌ hijerena ireo rakitrao indray mandeha dia mitambatra. Amin'ny Macs, tsy maintsy mankany isika Safidin'ny rafitra -> ‌iCloud‌, ary safidio ny ‌iCloud Drive‌ amin'ny macOS. Amin'ny Mey 2022, ny antontan-taratasy ‌iCloud‌ sy serivisy data dia hajanona ary soloina ‌iCloud Drive‌ tanteraka.
Dingana lozika amin'ny fiheverana fa te-ho avy ny Files App izay ahafahantsika miditra amin'ireo angona rehetra ananantsika amin'ireo fitaovana Apple rehetra. iCloud Drive no hany tokana hihaonana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple hanambatra ny iCloud Documents sy ny serivisy Data miaraka amin'ny iCloud Drive amin'ny Mey 2022
Ny AirPods Pro miaraka amin'ny vidiny tena ambany